Ukuze ukwazi ukubona ukuthi yini sauce for shawarma esifanelana kunazo, udinga ukuchaza shawarma mbono.
Emadolobheni amakhulu ungakwazi ngokuvamile ukuthola zinsiza, lapho mpo ku uhlomo omkhulu ukulungiselela izingcezu fake planed inyama Lokudabuka engaziwa. Khona-ke inyama zihambisana Pita isinkwa, ngokuthi izwi elihle "shawarma".
ECaucasus, lokhu dish iphekwe akunjalo. Empeleni, ungakwazi yini ukupheka Shawarma ngokuqondile. Ukuze wakhe ukulingana kahle nalo lonke kusihlwa eyosiwe inkukhu, eyosiwe, inyama abilisiwe. Inyama kunambitheka kangcono, the tastier uthole shawarma ngomumo. Inyama iyasikwa ibe yizicucwana amancane, exutshwe amakhambi, upelepele nezinye izinongo.
On the table ahlabayo lenzelwa Pita mncane. Ngokuvamile e Izitolo okudayisa ke nivame imayonnaise. Nokho, kungenzeka ngenxa emizi ukuvilapha noma okuhlangenwe nakho. Eliphezulu imayonnaise esihlwabusayo kakhulu. Kodwa izitsha isixha kuyoba acebile kakhulu uma usebenzisa nososo ezikhethekile Shawarma. Kungaba ahlukene: ezimhlophe, garlic, obomvu, okubabayo noma okubabayo. Ukuze ufunde indlela ukulungiselela nososo for shawarma sixoxa ngezansi. Futhi okwamanje ...
On ezinamafutha akahle Pita ukusabalala inyama nengulube sauce phezu - imifino. Kukhona indawo fantasy. Lokhu kungaba "Korean" izaqathe, amakhowe, utamatisi fresh kanye ukhukhamba, iklabishi isaladi abasha ... In short, konke oyithandayo i isaladi abavamile kungaba umphelelisi ephelele ukuze inyama. Unqenqema engezansi Pita ezigoqwe ukuze ukugxusha angawi ngaphandle ke iphuma ikhekhe nge tube ukugxusha, ezibekwe phezu sauce for shawarma ... futhi thokozela ukudla kwakho! Futhi uma shawarma cool kancane, ungakwazi ukuxoxa ku-microwave.
Futhi manje sekuyisikhathi ukukhuluma kanjani ukulungiselela sauce for shawarma.
Okuvame kakhulu, mhlawumbe, le emuhlompe. Kuyodinga isamba alinganayo ukhilimu omuncu kanye imayonnaise, garlic, dill, parsley, cilantro, anyanisi izimpaphe, emhlabathini pepper. imifino oqoshiwe lidlule (kulapho ngcono) futhi ngokusebenzisa chesnokodavku garlic ixubene ukhilimu omuncu, imayonnaise, pepper, usawoti.
Lokhu sauce for shawarma ephelele namanye esake sawenza sisendleleni, lapho akwenzeki ukulungiselela isithokelo eyingozi. Ekhaya, ngangivame wakhonza inyama zakudala bechamel usoso, ke ifanele kusetjentiswa kahle futhi shawarma. Kodwa mina ukuphatha uhambo kulula iresiphi emhlophe sauce. Ngiyakuthanda ukupheka sauce for shawarma esekelwe iyogathi: kuvela kulula, ethambile.
Ngaphezu kwalokhu kudla kuphezu kubalulekile, ungakwazi ukwengeza ikhukhamba oqoshiwe, utamatisi, paprika. Konke kuncike kulokho-ke ufana nokudla.
Hhayi ngaphansi ethandwa sauce abomvu ngoba shawarma. Yigama kuhlanganiswe nososo ezahlukene ngokuphelele obomvu.
Indlela elula wabo ibhalwe kanje. Ithathwe ingxenye elinganayo utamatisi, sweet pepper noma paprika, garlic, pepper ashisayo ukunambitha, amaconsi ambalwa zamafutha omnqumo. Konke kuhlangene, kuchotshoziwe in a blender. I unama okuholela sengezwe amakhambi oqoshiwe: kungaba Mint, basil, cilantro, sage, iyiphi enye. I amakhambi kabanzi esetshenziswa, ezincane esikwa, le elimnandi ngaphezulu uphendulela sauce abomvu ukuze shawarma.
By the way, Pita isinkwa kungenziwa nivame ngesikhathi esifanayo nososo ezimbili: ekuhlanganisweni anika nice, isixha ibuthaka.
sauce Garlic ngoba shawarma libhekene ukunambitheka abukhali. Njengengubo nje zokuqala ezimbili ongakhetha zidinga eziningi amakhambi. Isisekelo sauce ukwenza kanjalo. Ngo garlic blender kwakugaywa, kancane kancane ukwazi iqanda eluhlaza, amafutha yemifino kanye uviniga ambalwa amathonsi. Ngenxa yalokho, kufanele uthole mass homogeneous elimhlophe, abukhali kakhulu futhi ngokushesha. It enyakaza nge oqoshiwe amakhambi fresh and pepper.
Vele ngifuna uqaphele ukuthi ukuvumelana noma super-iresiphi nososo alikho. Iqanda garlic sauce ungayithola enye ne-yogurt, uviniga - iwayini ezomile, njll intombi eseceleni Bangaki - izindlela eziningi kangaka. Kuyefana nasendleleni shawarma kakhulu. Ngakho-ke asikho isidingo ukuphula umkhonto, insabula, ukuxoxa, isidlo kahle noma cha okuphekiwe. Kungcono ukukhombisa umcabango, zama futhi ukhethe ukuthi yini engase ikhange.
Meatballs ka nengulube inyama: ukupheka iresiphi. Indlela yokwenza meatballs of inyama nengulube?